एक समयकी चर्चित अभिनेत्री माधुरी दीक्षित रेप सिनपछि यस्तो बेहाल भएकी थिइन…
बलिउड र हलिउड फिल्महरुमा धेरै किस सिन,बेड सिनहरु दिएको देखिन्छ। फिल्म हेर्नेलाई झट्ट हेर्दा सामान्य र सजिलै लाग्छ तर त्यस्ता बोल्ड सिनहरु दिनेलाई निकै तनाव र समस्या हुने गर्छन्। जस्तै फिल्मका स्टन्टदेखि लिएर रेप सिन गर्दा धेरै खतरा र अप्ठयारा परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने हुन्छ।
त्यस्ता दृश्यहरु दर्शकको मनोरन्जनका लागि कलाकारहरुले ठूलो जोखिम उठाउने गर्छन्। कथाको माग अनुसार कलाकारहरुले आफ्नो ज्यानै पनि जोखिममा राखेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बलिउडकी एक समयकी चर्चित अभिनेत्री माधुरी दीक्षितसँग जोडिएको छ त्यसको बारेमा रोचक कुराहरु:
प्रेम प्रतिज्ञामा माधुरी दीक्षितले दिएकी थिइन् रेप सिन
बलिउडका चर्चित खलनायक रंजीत आफ्नो समयका अत्यधिक चेलेका खतरनाक भिलेनको रुपमा चिनिने गर्थे । फिल्म प्रेम प्रतिज्ञामा त्यो समय हर युवा दर्शकको दलमा बस्न सफल नायिका माधुरी दीक्षितसँग उनको एक रेप सिन थियो। फिल्म ‘प्रेम प्रतिज्ञा’ को कथामा माधुरी र रंजितका बीच बलात्कारको दृश्य स्क्रिप्टको डिमाण्ड थियो। त्यसकारण माधुरीले पनि उक्त दृश्य गर्न अस्विकार गरिनन्।
जब यो रेप सिन माधुरी दीक्षित र रंजीतसँग छायांकन सुरु भयो तब यो रेप सिन गर्ने बेला रंजितले आफुलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् सुटिंग कै बेला उनी माधुरीसँग साँच्चीकै जबरदस्ती गर्न सुरु गरे ।
तब माधुरीले के भनिन् ?
जब बलात्कारको दृश्य सकियो र फिल्मका निर्देशकले माधुरीलाई सोधे, तपाईलाई कुनै अप्ठयारो त भएन ? तपाई ठिकठाक हुनुहुन्छ ? यसको जवाफमा मधुरिले भनिन्,मलाई धेरै डर लागिरहेको छ । त्यसपछि डरले कापेकी माधुरीले साहश निकालेर रेप गर्ने खलनायक रंजीतलाई ‘म भन्दा टाडा बस्’ भन्दै हकारेकी थिइन्। त्यसपछि मधुरीले रंजितसँग एक दुई वटा भन्दा बढी चलचित्रमा काम गरिनन् । ति फिल्महरु रेप सिन थिएनन पनि।
चर्चीत मोडल पुनम पाण्डेले आफ्नो ब्वाईफ्रेन्डसंगको यौनक्रिडाको भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गरेपछी (भिडियो सहित)